North and Center - Tononkira Malagasy - serasera.org
You are here: home > Tononkira > Mpihira rehetra
North and Center
Nampiditra : Valerianne
Tamin'ny : 08/04/2005 03:51:09
North and Center dia mankalaza ny fahafolo taona niforonany amin'ity taona 2005 ity. Namoaka rakikira izy ireo ho tsangam-bato. Nanao fampisehoana izy ireo ho fampafantarana io rakikira io tamin'ny 02 avril teo. Dia mankafiza azy ireo fa ry zareo dia ho an'ny olona rehetra ny rap hiangaliny fa tsy ho an'ny mpiangaly rap fotsiny.
Lisitry ny hira
Pauld (17/02/2019 01:35:19)
8 no mpikambana ao am north and center dia I Kade (mbola), bobe (Merphy), mk g (Ando) raslava ( Haja), Gérard (mpitendry valiha the D three) kathia , Tsiory, Patty, Randy moa dia efa tsy afaka itsony fa ny azony mba fanampiany ny groupe dia rehefa eto antanindrazana izy dia manampy eo am ara tekinika sy ara kevitra nohon'ny asa moa no nahatonga aza ho tsy afaka itsony ef 24 taona nisina kosa ny north and center amin'izao ary tany amboalohany dia izy efatra mirahalahy no namorona io tarika io dia kade, raslava, make g ,ary boby. Fa taty aorina dia nampina an'ny Randy. Avieo nampina an kathia avieo nampiana an Gérard, ary nampiana an 'i Patty sy Tsiory, tsy adino moa i donat izay nanampy betsaka tamin'ny lafiny maro koa maniry ny tarika mba hitohy atrany satria tena anisan'ny tarika panao rap gasy miavaka tokoa ra ny tarika north and center.
Valerianne (08/04/2005 07:51:09)
BEN (05/07/2004 11:06:28)
Ny North and Center dia efa nisy nanomboka t@ taona 1995, midika izany fa tena manana ny maha izy azy tokoa ry zareo.
Misy efatra mianadahy ry zareo no mpikambana ao dia tsy iza izany fa: Ralava, Mec ji, Randy ary Merphy.
Ny dikany hoe North and Center moa dia arakizay anaran'ny zay hoe: North: avy any Avaratra dia tsy iza izany fa i Merphy, ny Center kosa dia hoe avy eto ampovoan-tany dia tsy iza izany fa i Randy, Mec Ji ary Ralava.
Maro ireo hira nahafantarana any North and Center, kanefa maro @ isika no mihevitra fa hira milamindamina avokoa ny hirany, misy isankarazany ny hirany North and Center izay tsy miresaka momba ny fitiavana fa ny fiaraha monina tsotra izao, anisan'ny zany ohatra ilay hira hoe "Frime" izay hitantsika ao @ album avoaka ato ato, "Revy sa Ditra" anisany hira tena nahafantarana azy koa izany, io hira io dia ilay Bande originale ilay serie tao @ RTA fahiny. Ny anaran'ny clan ny North and Center moa dia ny 8 mene maso
Page rendered in 0.0263 seconds